Soo dejisan Trend Micro Antivirus+ 16.0.1249 – Vessoft
WindowsAmnigaAntivirusesTrend Micro Antivirus+
Bogga rasmiga ah: Trend Micro Antivirus+
Trend Micro Antivirus + – alaab ammaan oo aad u fiican oo looga hortago khayaanada, phishing iyo fayraska. Nidaamku wuxuu isticmaalaa teknoolojiyada barashada mashiinka horumarsan si loo hagaajiyo ilaalinta heerarka kala duwan una diidaan khatarta joogtada ah ee soo baxa. Trend Micro Antivirus + waxay awood u leedahay in ay bixiso difaac dheeraad ah oo loogu talagalay galalka la soo xulay, taas oo xakamaynaysa kumbiyuutarrada si ay u helaan faylasha ayna ka ilaaliyaan weerarada ransomware. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dejisid heerka amniga ee looga baahan yahay si loo xakameeyo bogagga khatarta leh ee khatarta ah iyo in la hawlgeliyo dusha qalabka caawiya si looga ilaaliyo isticmaalka kombiyuutarka ee botnets. Trend Micro Antivirus + Fiiriya emailada soo socota si xayeysiis ah ama farriimo aan la rabin oo la tirtiro faylasha kuxirta emailka si taxadir leh loo hubiyo hanjabaadaha. Sidoo kale, Trend Micro Antivirus + ayaa ka hortagi kara codsiyada si toos ah u codsiga qalabka dibadda iyo la socoshada isku dayyada barnaamijyada si ay u sameeyaan isbeddel aan la oggolayn ee nidaamka nidaamka.
Nabdoonaanta iyo anteenware
Ka mamnuucidda bogagga khatarta leh ee khatarta ah
Ilaalinta xogta lagama maarmaanka u ah ransomware
Hubi xiriirada shabakadaha bulshada
Soo dejisan Trend Micro Antivirus+
Faallo ku saabsan Trend Micro Antivirus+
Trend Micro Antivirus+ Xirfadaha la xiriira